Cabin Air Sefa C36115 Retrofit Kit Inoenderana neChevy, Cadillac uye GMC Mota,Silverado,Sierra,Yukon,Tahoe,Suburban, China Cabin Air Filter C36115 Retrofit Kit Inoenderana neChevy, Cadillac neGMC Mota,Silverado,Tahoe,Silverado,Sierra Vagadziri, Suppliers, Factory - TAKUMI AUTO PART
Cabin Air Sefa C36115 Retrofit Kit Inoenderana neChevy, Cadillac uye GMC Mota,Silverado,Sierra,Yukon,Tahoe,Suburban
mhando Chikamu nhamba
PSI Relief Anti-Drain Kureba/Kureba/Kufara
CABIN AIR FILTER C36115 Ehe Ehe 2.25(57mm)/8.86(225mm)/9.23(234mm)
basa setifiketi kunyoresa Cross Reference
Tsvina Guruva ISO/IATF16949 Subaru forester PHB6079,PC6115,987,3775,24030,CAF1869P
Mubvunzo: Mafirita eTakumi ane waranti here?
A: Ehe, chero sevhisi ichiitwa nemakanika anokwanisa anotevera mugadziri's tsanangudzo.
Mubvunzo: Kana ndikakwana sefa yakanaka, ndingashandisa mafuta emhando yakaderera here?
A: yemhando sefa haizochengetedze injini yako kubva mukupfeka zvakanyanya kana paine kushandiswa kwenguva refu kwemafuta emhando yakashata. Oiri yemhando yakaderera kazhinji inoreva kuti mafuta ekuwedzera anodzikira nekukurumidza, achiisa kushushikana kwakawanda painjini. Ita shuwa kuti unoshandisa yakanaka mhando mafuta uye mafirita.
Mubvunzo: Iyo sefa yemafuta yakadonha ichangobva kuiswa? Iva nechokwadi chekuti sefa yaive
A: (a) Tarisa yekare yekuvharisa gasket yakabviswa muinjini yekumisikidza base ndiro uye ndiro iyo isn't kukuvara kana kumonyoroka. (b) Ita shuwa kuti sefa yakarongedzerwa nemazvo negasket nyowani yekuisa chisimbiso. (c) Tarisa threaded stud isn't kukuvara kana kusununguka.
Mubvunzo: Sei akawanda mafirita emhepo aine waya skrini?
A: Kupa simba kune sefa nekuda kwekukwira kwemhepo kuyerera uye kupa kuchengetedzwa kwemoto kana paine kudzoka.
Mubvunzo: Ndinofanira kuchinja riini sefa yangu yemhepo?
A: Iyo sefa yemhepo inofanirwa kushandurwa maererano nenzvimbo yekushanda yemotokari, semuenzaniso munzvimbo inopisa, ine guruva inodiwa nguva zhinji yekuchinja nguva. Chero zvazvingava kurudzira kuchinja mwedzi gumi nemiviri yega yega zvisinei nemamiriro ezvinhu kana chinhambwe chafambwa.